Weeedhihii laga yidhi, Shaqsiyaddii Turjubaan Qoraa, Suxufi iyo Siyaasi Xaamud Jaamac oo Cadan lagu Aasay - Somaliland Post
Home News Weeedhihii laga yidhi, Shaqsiyaddii Turjubaan Qoraa, Suxufi iyo Siyaasi Xaamud Jaamac oo...
Weeedhihii laga yidhi, Shaqsiyaddii Turjubaan Qoraa, Suxufi iyo Siyaasi Xaamud Jaamac oo Cadan lagu Aasay
“Wuxuu u tabarucay noloshiisa hal-abuurka qiimaha badnaa ee qoraalkiisa iyo tarjumaadda suugaanta dhaxalka uu ka tegey.” Madaxweynaha Yemen Abdurabbuh Hadi
“Waxa Baxay Midabkii Caqliga Badnaa” Wuxuu tusaale u ahaa caalimka cilmiga, diinta iyo caqiidada, Cali Naasir Madaxweynihii hore ee Cadan
“Cadan waxay Weyday Wiilkeedii” Jariirada Al Ayyam
Cadan (SLpost)- Magaalada Cadan, gaar ahaan gobolka Kreiter, ayaa sagootiyay Marxuum Xaamud Jaamac Xusueen oo ku suntanaa suugaanta, isla markaana hormood u ahaa dhaqankeeda, siyaasadeeda, saxaafadeeda iyo shaqsiyaadkeeda warbaahinta iyo haldoorka, waxaana loogu yeedhay inuu ahaa Marxuum Xaamud Jaamac meeshii ugu dambeysay ee halganka iyo inay Cadani weyday wiilkeedii.
Sidaa waxa yidhi, Wargeyska Al Ayyam oo ka mid ah kuwa ugu da’ada weyn xilligan Magaalada Cadan uguna Af-dheer oo wax ka qoray Geerida Allah ha u naxariistee Xaamud Jaamac Xuseen, wuxuuna Wargeysku isagoo kasii hadlaya murugada Geerida sheegay in Cadan ay weyday, caaqil, turjubaan, qoraa, suxufi iyo siyaasi caan ahaa Xaamud Jaamac oo Arbacdii 31 July aas qaran loogu sameeyay Cadan.
Marxuum Xaamud Jaamac oo noloshiisa mashquulka badan ka dib u adeegay magaaladiisa Cadan iyo dadkiisaba xilalkii uu ka qabtayna ay ka mid ahaayeen Wasaaradaha Dhaqanka iyo Warfaafinta. , Sidoo kale howlihiisii iyo qoraalladii iyo tarjumadihii lagu daabacay joornaalka ‘xikmadda’ ee midowga qoraayaasha Yemen, iyo markii dambe wargeyskii “Altagamu Alwahdal Yemen» oo ku hadlayay afkii Xisbiga (Altagamu Yemen Unionist Rally Party), kaas oo ka mid ahaa tiirarkii daabacaaddii ugu horreysay sagaashameeyadii, kasoo bixi jiray Magaalada Cadan.
Wargeyska, ayaa sheegay in Halyeeyga Xaamud Jaamac wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqiisii siyaasadeed goor hore, isagoo xubin ka ahaa Ururka Dimuqraadiga Dadweynaha ee uu hoggaamiyay aakhirkii Abdullah Baheeb, ka dibna wuxuu xubin ka noqday Xisbiga Midnimada Yemen, wuxuuna Ururka Midowgu uu ka koobanaa siyaasiyiin iyo aqoonyahan ay ka mid ahaayeen Dr. Omar al-Jawi. Dr, Abdulrahman Abdullah Ibrahim, oo labaduba dhintay, Dr. Abu Bakr al-Saqqaf iyo Khalid Fadl Mansour iyo shaqsiyaad kale oo dhammaantood u Ololaynayay, isla markaana hormood u ahaa midnimada labadii Yemen sagaashandii.
Xaamud Jaamac, ma ahayn oo keliya Siyaasi, suxufi iyo qoraa ee wuxuu ahaa shaqsi ku xeel-dheer Luqadaha , waxaana si gaar ah loogu ixtiraami jiray Luaqadaha Carabiga iyo Ingiriisida, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa qof ugu wanaagsan Cadan marka ay noqoto Turjumaada, wuxuuna Turjumi jiray Luqado kale.
Wuxuu Turjumay Bugaag baddan iyo Qoraalo oo noqday tarjubaanada ugu wanaagsan Cadan.Wuxuu hayay tarjumaado badan oo qaarkood la daabacay, qaarna waa la filayay . Sanadkii 1988, waxaa lagu daabacay joornaalka Xisbiga hantiwadaagga, joornaalka caqliga ee Xisbiga hantiwadaagga. Qaybta labaad ee buugga David Smiley ee “Howlgalka Jasiiradda Carbeed” ( «مهمّة في الجزيرة العربية» )ee ku saabsan xaaladda Yemen sannadihii 1980-naadkii.waxa kale oo loo tarjumay buugga saddexaad oo cinwaankiisu yahay “The Last Site“, oo ah tarjumaadda qoraalada sarkaal iyo siyaasi Ingiriis ah oo ku saabsan sannadihii u dambeeyay ee Cadan.
Jariirada Al Ayyam, waxay gebagebadii Maqalkeeda ku sheegtay inay ka murugaysantahay geeridaa, isla markaana tacsi tiiraanyo leh u dirayaan qaranka Yemen, qoyski, eheladii , qaraabadii iyo asxaabtii uu ka dhintay Marxuum Xaamud Jaamac , iyagoo Eebbe uga baryay inuu qof walba ku dhiirrigelinaya samir iyo samir iyo inuu u dhowro marxuumka naxariis iyo dambi dhaaf.
Dhinaca kale Marxuum Xaamud Jaamac, waxa ka hadlay Madaxweynaha Dalka Yemen Abdurabbuh Mansur Hadi,waxaana qoraal uu kaga hadlay Taariikhdii Marxuum Xaamud Jaamac, isla markaana xanbaarsan dhanbaal tacsiya oo uu soo saaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Yemen, wuxuu ku gudbiyay suugaantii wanaagsanayd ee uu ka dhintay Xaamud Jaamac muddadii uu ku jiray hawshiisa mashquulka badan.
Madaxweyne Abdurabbuh Hadi, ayaa ku ammaanay marxuumkaa inuu u tabarucay noloshiisa hal-abuurka qiimaha badnaa ee qoraalkiisa iyo tarjumaadda suugaanta Ingiriisiga iyo hoggaamintii isaga iyo saaxiibkii dhintay ee dagaalyahankii Cumar al-Jawi eewargeyska Al-Tagammu oo Xaamud Jaamac ka ahaa soo saare, wuxuuna Mr. Hadi u rajeeyay Marxuumka in Ilaahay u naxariisto oo jannooyinkiisa ugu deeqo, isagoo tacsi tiiraanyole u diray qoyskii, ehelkii, qaraabadii iyo asxaabtii marxuumka. sida lagu daabacay barta internetka ee golaha Yemen.
“Waxa Baxay Midabkii Caqliga Badnaa” sidaa waxa qoray Madaxweyne Cali Naasir Maxamed oo aqoon fiican u lahaa Xaamud Jaamac, isla markaana ay saaxiibo dhaw ahaayeen Walalkii Siciid Jaamac Xuseen, wuuxuna Cali Naasir oo ka hadlayay geerida Xaamud Jaamac Xuseen, qoraalkiisa ku yidhi, “Xaamud Jaamac wuxuu ahaa nin caan ah, sharaf leh oo Cadani ah, halkaas oo uu ku dhashay kuna noolaa nolosha fudud ee wanaagsan isaga iyo wiilashoodii, kama uu tegin weligii Cadan ilaa uu ku dhintay, isagoo weli ku jira halgankii uu naftiisa ugu hibeeyay sidii ay Cadan u horumari lahayd.
Kama tegin dhaxal lacag ah, maxaa sababy isagu ma uu haysan lacag uu dhaxlo Iyo hanti masaakiintu laadahay iyo dhulka. Caruurtuna waxay ku dagaallamilahaayeen dhaxalkiisa maxaa yeelay ma uu guursan! Kuwa ka soo horjeedana waxay gooyeen himiladiisa sababtoo ah waxay ku kala fogaayeen loolanka siyaasadeed.
Wuxuu tusaale u ahaa caalamka cilmiga bulshada, cilmiga diinta iyo caqiidada, wuxuu jeclaa Bulshada Cadan, wuxuu nebcaa munaafaqnimada iyo munaafiqiinta . Wuxuu ahaa sida reer Cadan, Ka soo qaad buuralayda midabkooda madowga iyo adkaanta Ka qaadashada awooda badda iyo qoto dheerida fikirka iyo taariikhda, kalsoonida iyo dhiiranaanta, wuuxuna ahaa tusaale laga soo qaaday dadka ku nool Cadan iyo ilbaxnimo iyo jacaylka nolosha, sidaa awgeed wuxuu noqday ruuxa qaatay halyeynimada iyo dhaqanka iyo quruxda Cadan, wuxuuna ahaa halyeeyada u adkaystay rabshadaha.
Tani waa sida uu Alkseer ugu noolaa noloshiisa iyo xaqiiqada ah in falsafadiisa iyo riyadiisa iyo xiidhashada cirka ayna suurtagal ahayn inay ku dhacaan markii dad badani ku dhacday oo ka baxeen mudaakaraadkoodii,(riyooyinkoodi) maxaa yeelay waxay ku qanceen, oo aan u hanweynayn jago ama shaqo, sida kuwa kale oo badan.
Laakiin Xaamud Jaamac, wuxuu sii watay hamigiisa iyo halgankiisa, kama uu bixin dalka ama uma safrin magaalooyinkii Galbeedka ama Bariga, xitaa isagoo la dhibban nolosha iyo dhibaatada nolosha iyo dulmiga ragga iyo geerida ku habsatay asxaabta ay halganka ugu wada jireen iyo sidii ay u walaalayn lahaayeen umadda, in kasta oo uu lahaa fursado badan laakiin ma uu samayn inuu bedelo hadafkiisa iyo halgankiisa.
Hamigiisa iyo riyooyinkiisu waxay ahaayeen sidii ay dadku ku gaadhilahaayeen nolol xor ah oo sharaf leh. Waxayna ka buuxsantay rajo, adkeysi adag inuu diiday in laga adkaado iyo guuldaradii ugu adkeydse ayaa noqotay geerida.
Wuxuu qoray, Xaamud Jaamac oo tarjumay oo aan akhristay marar badan, waxyaabaha uu daabacay qaar ka mid ah wixii uu turjumay.waxuu aad ugu fiicnaa Ingiriisiga, oo uu ku tarjumay tarjumaadda Carabiga oo uu tarjumay, maktabadda Cadan, wuxuu ku kobciyay buugaag qiimo leh oo tixraac u noqday aqoonyahannada iyo jiilalka danbe.
Isagu ma uu aqoon jidkii jagooyinka xilalka sababtoo ah caqliga dhabta ahi wuxuu ka weyn yahay jago kasta, Weligii ma arkin kalsooni darrada ka jirta albaabada xukuumadda maxaa yeelay xiriirka guud ahaan waa isku buuqsan yahay taliyaha iyo caqliga, marka laga reebo xaalado naadir ah .. Wuxuu isu arkay inuu ku dhowyahay caqliga dhabta ah iyo dadka fudfud maxaa yeelay wuxuu iska leeyahay.
Falsafadii, Xaamud Jaamac ku noolaa, wuxuu uga dhintay dadka, saaxiibkii oo ahaa buugag, wuxuu aad u jeclaa ereyada, cadaalad iyo garsoor, waana astaamaha uu uga tegay Cadan, oo aan jeclahay iyo dadkeeda aan la jeclahay sharafta oo aan la qaybsanyo muruga geerida Xaamud Jaamac.
He did not know the way to the positions because the real intellectual is greater than any position .. He never saw the uncertainty of hesitation on the doors of the rulers because the relationship is generally confused between the ruler and the intellectual, except in rare cases .. He found himself closer to the real intellectuals and simple people because it belongs to them
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة بوفاة الأديب والمترجم والكاتب حامد جامع الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.
Sidoo kale, Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Yemen, Lieutenant-General Ali Mohsen Saleh, ayaa ka hadlay geerida qoraa, turjubaan, siyaasi Xaamud Jaamac, wuxuuna bogaadiyay guulaha uu ku dhintey iyo doorka qaran iyo doorka hal abuurka leh ee uu ka qaatay tarjumaada iyo kobcinta hanaanka siyaasada ee Yemen gaar ahaan Cadan, isaga oo ka qeyb qaatay aas aaska xisbiyada isbaheysiga midnimada dalka.
Madaxweyne ku xigeenku wuxuu tacsi tiiraanyo leh u diray qoyskii iyo eheladii uu ka baxay marxuumku, isagoo Illaahay uga baryay inuu naxariistiisa iyo janadii fardawsa ka waraabiyo, qoyskiisana samir iyo iimaan ka siiyo.
Madaxweynaha Yemen Abdurabbuh Mansur Hadi iyo ku xigeenkiisa iyo madaxweynihii hore ee Cadan Ali Naasir iyo suxufiyiin iyo siyaasiyiin kale ayaa ka hadlay geerida Allah ha u naxariistee Adeer Xaamud Jaamac Xuseen oo abaal badan ku lahaa annigaba Carraale M. Jaamac mudadii nolloshayda Cadan oo aannan ilaabi karin, waxayna dhammaantood qireen taariikhda dahabka ah ee uu lahaa iyo inuu ahaa laambad u iftiimay Cadan, balse buugaag qiimo leh oo tixraac u noqday, ama u noqonaya aqoonyahannada iyo jiilalka danbe uu ka tegey Marxuum Xaamud Jaamac, sida uu sheegay Madaxweynihii hore ee Cadan Cali Naasir Maxamed.
Marxuum Xaamud Jaamac Awowgii Xuseen Faras Allah ha u naxariistee, wuxuu ahaa Soomaalidii ugu horaysay ee degtay Magaalada Cadan oo aad u yar ku dhowaad laba qarni horteed, balse ahayd Magaalo ganacsi oo deked caalami ah leh.
Xaamud jaamac Xuseen, Siciid jaamac Xuseen iyo Saalax jaamac Xuseen, waa saddex walaalo ah oo dadka aqoonta looga danbeeyo ah saqaafada carabta soomaalida iyo dunida kaleba, waana shaqsiyaad safaaxada dunida iyo masraxyada aqoonta aad looga yaqaan, waxay ku wada dhasheen oo ku barbaareen Cadan, Siciid Jaamac, wuuxu xiligan deganyahay London, Saalax jaamac, wuxuu joogaa Canada.
Marxuum Xaamud jaamac walaalihii maaha Siciid iyo Saalax oo keliya ee saddexdooda ayaa noqday shamacyo ifaya oo la falgalay Caalamka aqoonta iyo falsafada, waxaana ka tacsiyaynayaa geeridaa dhamaantood .Marxuumkana waxaan Allah uga baryaynaa inuu Jannafardawsa ku casuumo dhammaanteena samir iyo Iimaan saadiqa inaga siiyo.
Arraale M. Jaamac Freelance Journalist and Human Rights activist.